Rugby – «Can 1B Junior» : nofaizin’ny Makis ny The Cranes ogandey (NewsMada) | AEMW
Rugby – «Can 1B Junior» : nofaizin’ny Makis ny The Cranes ogandey (NewsMada)
Nahita fahombiazana avy hatrany ny Makis de Madagascar, teo amin’ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B), sokajy “junior”, eo amin’ny taranja rugby. Lavony tamin’izany ny The Cranes avy any Oganda.
Tsara fanombohana ny Makis de Madagascar, sokajy “junior”, teo amin’ny fihaonana voalohany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B). Nofaizin-dry zandrikely ary voakaravasy mafy mihitsy ny The Crane ogandey, tamin’izany. Lavon’ny Makis, tamin’ny isa 37 noho 6, mantsy ry zareo Ogandey. Fihaonana natao tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly alakamisy.
Tsy nampoizin’ny Ogandey mihitsy ny lalao nasehon’ny Makis, tamin’ity. Nakan’ny Malagasy “bonus” mantsy ry zalahy. Nisesy ny baolina nentin-tanana, na teo amin’ny fizaram-potoana voalohany na teo amin’ny tapa-potoana faharoa. Vao nanomboka 4 mn monja ny lalao, efa nanokatra ny isa tamin’ny alalan’ny baolina nentin-tanana i Todisoa ary voatsaran’i Fanomezantsoa Robel izany. Nampihena ny isa indray ry zareo Ogandey, tamin’ny alalan’ny “drop goal” vitan’i Munyani Ian, ka nahatonga ny isa ho 7 noho 3. Tsy nitsahatra teo fa mbola nitohy ihany avy eo ny baolina nentin-tanana nataon’ny mpilalaon’ny Makis. Anisan’ny nahavita izany i Dino (11 mn) sy i Francklin (30 mn) ary ny “coup de pied de penalité” vitan’i Fanomezana. Nanampy ny isany ho 6 kosa avy eo i Muhire Enock, ary io isa 22 noho 6 io no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nanjakan’ny Makis de Madagascar tanteraka ny fizaram-potoana faharoa. Nibodoan’ny mpilalao malagasy ny tanin-dry zareo Ogandey. Tsy tafavoaka nanoloana an-dry Andry Be sy ry Sitraka ary ry Nantenaina ireo Ogandey, notarihan’i Owen sy Kenneth ary ry Anold. Vokany, mbola nahatsindry baolina indray ny Malagasy, tamin’ny alalan’i Francklin, niampy ny “hors jeu”, voatsaran’i Tahina. Tetsy ankilany, tsy nahafaty baolina ry zareo Ogandey.
Hany sisa nataon’ny Ogandey, ny nandaka baolina niala tany fotsiny, izay efa niandry nosarahina.
Efa any amin’ny sokajy 1A izany ny tongotra ilan’ny Makis de Madagascar, taorian’ity fandresena ity. Mitarika mantsy ny Malagasy satria tamin’ny isa 22 noho 12 ny nandresen’i Sénégal an’i Maraoka, teo amin’ny fihaonana ilany, izay notontosaina tany Maraoka.
Na izany aza, tsy mbola tafavoaka ny ala akory ny Makis satria mbola hisy ny lalao miverina ny alahady ho avy izao, etsy Mahamasina ihany.
← Afrobasket Women U18 : tonga soa any Egypta ny ekipa malagasy (NewsMada)
Affaire Ambohimahamasina : le flou persiste (NewsMada) →